Ranomainty - Changzhou longxin milina Co., Ltd
Ranomainty dia karazana Mametaka fifangaroan'ny ny loko, namehy mpiasa (resin menaka), additives toy ny diluent sy ny ranon-javatra paraffin hampieleziko. Azo pirinty amin'ny fitaovana maro samihafa toy ny baoritra, taratasy, foil vy, plastika, vy, hoditra amin'ny alalan'ny milina fanontam-pirinty. Ny endriky ny substrate ireo fitaovana mety ho fisaka, cylindrical, sns Ary ny fifehezan 'ny ranomainty dia miankina amin'ny fomba fanontam-pirinty sy ny fanazavana ny substrate.
Araka ny karazana lovia fanontam-pirinty. Ranomainty Azo zaraina ho 4 isan-karazany:
1.Lithographic fanontam-pirinty ranomainty
Izy io dia ankapobeny inks anarana isan-karazany mety ho lithographic fanontam-pirinty. Ho etỳ ambonin'ny ny lithography dia amin'ny fiaramanidina ankapobeny. Ny fomba dia oleophilic faritra sy ny tsy fomba faritra dia hydrophilic. Fanontam-pirinty dia mifototra amin'ny fitsipika fa ny menaka sy ny rano Mandositra ny tsirairay. Noho izany, dia tsy maintsy manana lithographic ranomainty rano fanoherana. Common lithographic fanontam-pirinty ranomainty anisan'izany offset fanontam-pirinty ranomainty, avo gloss offset ranomainty, resinous offset ranomainty, tranonkala-sakafo offset ranomainty, taratasy-sakafo offset ranomainty, efatra loko dingana offset ranomainty, mora-napetraka offset ranomainty, offset firapotsy-fanontam-pirinty ranomainty, hiteraka fanoherana pirinty offset firapotsy-ranomainty sy ny fanontam-pirinty collotype ranomainty.
Izany no ankapobeny inks anarana isan-karazany ampiasaina amin'ny fomba fanontam-pirinty letterpress. Izany no tena anisan'izany inks ampiasaina amin'ny boky, gazety, sary, faktiora, sns ny endri-javatra ny letterpress ranomainty dia ny ranomainty ampahany amin'ny fanontam-pirinty no protruding lovia avy ao amin'ny faritra tsy misy ranomainty. Common letterpress ranomainty anisan'izany ny letterpress ranomainty ho an'ny boky, loko letterpress ranomainty, Rotary letterpress ranomainty ho an'ny boky, Rotary vaovao letterpress ranomainty, Rotary letterpress vaovao loko ranomainty, lovia varahina fanontam-pirinty ranomainty, letterpress fanontam-pirinty ranomainty ho an'ny sarimihetsika plastika sy ny fanontam-pirinty flexographic ranomainty.
3.Gravure fanontam-pirinty ranomainty
Izany no ankapobeny inks anarana isan-karazany ampiasaina amin'ny fomba fanontam-pirinty gravure. Rehefa pirinty, ny fomba recessed faritra ny lovia dia inked dia hofafako hiala lavitra ny ranomainty avy any amin'ny faritra tsy fomba. Azo zaraina ho sarin-javatra gravure ranomainty sy ny sary gravure ranomainty. Common gravure fanontam-pirinty ranomainty anisan'izany malefaka fonosana ranomainty, sigara wrapping ranomainty sy ny fanontam-pirinty baoritra ranomainty.
4.Mesh fanontam-pirinty ranomainty
Izany no ankapobeny inks anarana isan-karazany ampiasaina amin'ny fomba fanontam-pirinty harato sy be mpampiasa amin'ny fanontam-pirinty damba, plastika fanontam-pirinty, vy fanontam-pirinty, tanimanga fanontam-pirinty, fitaratra fanontam-pirinty, vokatra elektronika fanontam-pirinty sy ny loteria fanontam-pirinty, sns Common harato fanontam-pirinty ranomainty anisan'izany ny taratasy fanontam-pirinty lamba ny ranomainty , plastika efijery fanontam-pirinty ranomainty, lamba lamba fanontam-pirinty ranomainty, fitaratra lamba fanontam-pirinty ranomainty, tanimanga efijery fanontam-pirinty ranomainty, mikorontana paharitry solvent ranomainty, etc.
Changzhou Longxin dia niara-niasa tamin'ny malaza maro any ivelany an-tokantrano sy ny ranomainty fanamboarana anisan'izany Toyo ranomainty, DIC ranomainty, DUBUIT ranomainty sy ny sisa. Ny milina dia aondrana any Etazonia, Brezila, India, Rosia, Japana, Korea, Singapore, Azia Atsimo sy ireo firenena hafa sy ny faritra, mankafy lazany avo avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Longxin ihany ny boninahitra Vice Unit Shinoa Filohan'ny Fikambanana Ink, ary foana ny zava-baovao sy ny mpitarika ny revolisiona ao amin'ity orinasa. Ankoatra izany, dia afaka planina sy hanorina indray ny vokatra manontolo tokana mifanaraka amin'ny milina araka ny mpanjifa fangatahana. Dia hanome ny tsara indrindra sy ny asa fanompoana tsara ho anao.
Fahazoan-dalana hidirana ny fitaovana ho an'ny ranomainty famokarana: DS andian-dahatsoratra loatra marina telo-roller fikosoham-bary, YS andian-dahatsoratra hydraulic telo-roller fikosoham-bary, WSJ andian-dahatsoratra marindrano anatiny-hihena feno miasa Bead fikosoham-bary, WSD andian-dahatsoratra mafy mikoriana fasika fikosoham-bary, WSS andian-dahatsoratra marindrano fasika fikosoham-bary, WSK andian-dahatsoratra High-viscosity zavatra maro loatra Bead bary
Product-dalana: High fahombiazana ranomainty vokatra tsipika, Gravure ranomainty tsipika vokatra mandeha ho azy, High-viscosity ranomainty (offset, UV offset, landy pirinty) tsipika vokatra